မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 1-2 ရှက်ဖီးလ်ဒ်ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ အချက် ၇ချက် – Sports A2Z
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 1-2 ရှက်ဖီးလ်ဒ်ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ အချက် ၇ချက်
ကံမကောင်းတဲ့ အဖွင့်ဂိုး – မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေဟာ ရှက်ဖီးလ်ဒ်ကစားသမား ကင်းန် ဘရိုင်ယန်ရဲ့ ဂိုးကို ကာကွယ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိခဲ့ပြီး သူတို့တွေအနေနဲ့ စက္ကန့်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစာ တွက်ချက်မှု မှားယွင်းပြီး ကံမကောင်းခဲ့တာ ဖြစ်သလို ပုတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဒဟေးယားကိုလည်း တစ်ဖက်တိုက်စစ်မှူး ဘီလီရှာ့ပ်က တွန်းထားခဲ့တာကို ဂိုးပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မရလိုက်တဲ့ ချေပဂိုး – ပထမတစ်ဂိုးကို ပေးလိုက်ရင် ဒီတစ်ဂိုးကိုလည်း ပေးရလိမ့်မယ်လို့ ရီယို ဖာဒီနန်ရဲ့ ဝေဖန်မှုက ဒိုင်တွေရဲ့ စံနှုန်းနှစ်မျိုးကို ပုံပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘီလီရှာ့ပ်ရဲ့ တွန်းခဲ့တာကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင် ခေါင်းတိုက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ နောက်ပြန်ထိပြီး ရမ်းစ်ဒေးလ် ဘောလုံးလွတ်ကျတာကလည်း သရေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒိုင်တွေက ယူနိုက်တက်ဘက်မှာ ရှိမနေခဲ့တာပါ။
ဖရိုဖရဲ ယူနိုက်တက် – ပရိသတ်တွေကြားမှာတော့ အာဆင်နယ်ကို ဒီလောက်ကြောက်ရလားလို့ အသံတွေ ထွက်နေပါတယ်။ အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လင်ဒီလော့ဖ်နဲ့ လုခ်ရှောကို အနားပေးလိုက်ချိန်မှာ ဝင်ကစားတဲ့ တွမ်ဇီဘီနဲ့ အဲလက်စ် တဲလက်စ်တို့ရဲ့ ခံစစ်ကစားပုံက ဆိုးရွားပြီး တွမ်ဇီဘီရဲ့ အမှားနှစ်ခုကနေ နှစ်ဂိုးပေးခဲ့ရလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာလည်း အရန်သုံးတဲ့ မာတစ်ချ်က ဖရက်ဒ်၊ မက်တော်မီနေးတို့လို ကစားအား မရှိချိန်မှာ တိုက်စစ်နဲ့ ကွင်းလယ်ကြားမှာ ပေါ့ဘာနဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ပါ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။
ပွဲထဲမှာဆို တိုင်ပတ်ဆဲ ဆိုးလ်ရှား – ဒီနေ့ပွဲကို ရှုံးနိမ့်နေချိန် မိနစ် ၇၀ ကျော်မှာ လူစားလဲမယ်ဆိုရင် သူ့အတွက် မာတာ၊ ဂျိမ်းစ်၊ ဖရက်ဒ်၊ မက်တော်မီနေးတို့လို ကစားသမားတွေ ကျန်နေပမယ့် ထည့်သွင်းလိုက်တာက လုခ်ရှောနဲ့ ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ ဗန်ဒဘိခ်တို့ပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ တစ်ဖက်ခံစစ်ကို ဂျိမ်းစ်ရဲ့ အမြန်နှုန်း၊ မာတာရဲ့ အကွက်မြင်မှု၊ တည်ကန်ဘောတွေနဲ့ ဖိအားပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့် လူစားလဲမှုတွေက ခုချိန်အထိ နော်ဝေ နည်းပြအတွက် ခက်ခဲတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ရှက်ဖီးလ်ဒ်ဘက်က တောင်ကြီးတစ်လုံး – အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဖီးလ် ဂျာဂျယ်လ်ကာကတော့ ဒီနေ့မှာ ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး ရှက်ဖီးလ်ဒ်နောက်တန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိုကွန်နဲလ်က ဒဏ်ရာ၊ အီဂန်က ပွဲပယ် ခံရတာကြောင့် မပါဝင်နိုင်ချိန်မှာ အဲဗာတန်ကစားသမားဟောင်းဟာ ငယ်ခြေပြန်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်သမားတွေ ကျော်ဖြတ်ဖို့ ခဲယဉ်းခဲ့တာပါ။
၄၈ နှစ်ကြာ မှတ်တမ်း ကျိုးပျက် – မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဒီရာသီရဲ့ ကမောက်ကမအနိုင်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ သူတို့အသင်းရဲ့ မှတ်တမ်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ရှက်ဖီးလ်ဒ်ကို ၄၈ နှစ်ကြာ မရှုံးတဲ့ စံချိန်ကို ကျိုးပျက်သွားခဲ့တာပါ။ ရှက်ဖီးလ်ဒ်တို့အနေနဲ့တော့ ယူနိုက်တက်ကို အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်နိုင်ပွဲ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ယော့ခ်ရှိုင်းယားကလပ်လည်းဖြစ်လာပြီး လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်ထက်တောင် သူတို့က သာလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
2 – Both Kean Bryan and Oliver Burke have scored their first Premier League goals tonight – it's the first time two players have netted their first PL goal against Man Utd in the same match since Esteban Cambiasso and Jamie Vardy did so in September 2014 for Leicester. Timing. pic.twitter.com/CRRzHRbLIA
ယူနိုက်တက်ကို ပထမဆုံးဂိုးတွေနဲ့ အားပေးခဲ့တဲ့ နှစ်ဦး – ဒီနေ့ပွဲမှာ ရှက်ဖီးလ်ဒ်ရဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ ကီးန် ဘရိုင်ယန်နဲ့ အိုလီဗာ ဘာ့ခ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုးတွေကို ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရှေ့မှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ လက်စတာရဲ့ အက်စတီဘန် ကမ်ဘီယာဆိုနဲ့ ဂျေမီ ဗာဒီတို့က အခုလိုမျိုးပဲ စံချိန်ရထားဖူးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ကံမေကာင္းတဲ့ အဖြင့္ဂိုး – မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြဟာ ရွက္ဖီးလ္ဒ္ကစားသမား ကင္းန္ ဘ႐ိုင္ယန္ရဲ႕ ဂိုးကို ကာကြယ္ဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိခဲ့ၿပီး သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ စကၠန႔္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစာ တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းၿပီး ကံမေကာင္းခဲ့တာ ျဖစ္သလို ပုတ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ဒေဟးယားကိုလည္း တစ္ဖက္တိုက္စစ္မႉး ဘီလီရွာ့ပ္က တြန္းထားခဲ့တာကို ဂိုးေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မရလိုက္တဲ့ ေခ်ပဂိုး – ပထမတစ္ဂိုးကို ေပးလိုက္ရင္ ဒီတစ္ဂိုးကိုလည္း ေပးရလိမ့္မယ္လို႔ ရီယို ဖာဒီနန္ရဲ႕ ေဝဖန္မႈက ဒိုင္ေတြရဲ႕ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳးကို ပုံေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ဘီလီရွာ့ပ္ရဲ႕ တြန္းခဲ့တာကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေခါင္းတိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ မက္ဂြိဳင္းယားနဲ႔ ေနာက္ျပန္ထိၿပီး ရမ္းစ္ေဒးလ္ ေဘာလုံးလြတ္က်တာကလည္း သေရပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒိုင္ေတြက ယူႏိုက္တက္ဘက္မွာ ရွိမေနခဲ့တာပါ။
ဖ႐ိုဖရဲ ယူႏိုက္တက္ – ပရိသတ္ေတြၾကားမွာေတာ့ အာဆင္နယ္ကို ဒီေလာက္ေၾကာက္ရလားလို႔ အသံေတြ ထြက္ေနပါတယ္။ အာဆင္နယ္နဲ႔ ပြဲအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လင္ဒီေလာ့ဖ္နဲ႔ လုခ္ေရွာကို အနားေပးလိုက္ခ်ိန္မွာ ဝင္ကစားတဲ့ တြမ္ဇီဘီနဲ႔ အဲလက္စ္ တဲလက္စ္တို႔ရဲ႕ ခံစစ္ကစားပုံက ဆိုး႐ြားၿပီး တြမ္ဇီဘီရဲ႕ အမွားႏွစ္ခုကေန ႏွစ္ဂိုးေပးခဲ့ရလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြင္းလယ္မွာလည္း အရန္သုံးတဲ့ မာတစ္ခ်္က ဖရက္ဒ္၊ မက္ေတာ္မီေနးတို႔လို ကစားအား မရွိခ်ိန္မွာ တိုက္စစ္နဲ႔ ကြင္းလယ္ၾကားမွာ ေပါ့ဘာနဲ႔ ဖာနန္ဒက္စ္ပါ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရတာပါ။
ပြဲထဲမွာဆို တိုင္ပတ္ဆဲ ဆိုးလ္ရွား – ဒီေန႔ပြဲကို ရႈံးနိမ့္ေနခ်ိန္ မိနစ္ ၇၀ ေက်ာ္မွာ လူစားလဲမယ္ဆိုရင္ သူ႔အတြက္ မာတာ၊ ဂ်ိမ္းစ္၊ ဖရက္ဒ္၊ မက္ေတာ္မီေနးတို႔လို ကစားသမားေတြ က်န္ေနပမယ့္ ထည့္သြင္းလိုက္တာက လုခ္ေရွာနဲ႔ ေျခစြမ္းမျပႏိုင္တဲ့ ဗန္ဒဘိခ္တို႔ပါ။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ တစ္ဖက္ခံစစ္ကို ဂ်ိမ္းစ္ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္း၊ မာတာရဲ႕ အကြက္ျမင္မႈ၊ တည္ကန္ေဘာေတြနဲ႔ ဖိအားေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ လူစားလဲမႈေတြက ခုခ်ိန္အထိ ေနာ္ေဝ နည္းျပအတြက္ ခက္ခဲတဲ့ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။
ရွက္ဖီးလ္ဒ္ဘက္က ေတာင္ႀကီးတစ္လုံး – အသက္ ၃၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဂၤလန္လက္ေ႐ြးစင္ေဟာင္း ဖီးလ္ ဂ်ာဂ်ယ္လ္ကာကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ ေျခစြမ္းျပခဲ့ၿပီး ရွက္ဖီးလ္ဒ္ေနာက္တန္းကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အိုကြန္နဲလ္က ဒဏ္ရာ၊ အီဂန္က ပြဲပယ္ ခံရတာေၾကာင့္ မပါဝင္ႏိုင္ခ်ိန္မွာ အဲဗာတန္ကစားသမားေဟာင္းဟာ ငယ္ေျချပန္ေပၚခဲ့ၿပီး ယူႏိုက္တက္တိုက္စစ္သမားေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ ခဲယဥ္းခဲ့တာပါ။
၄၈ ႏွစ္ၾကာ မွတ္တမ္း က်ိဳးပ်က္ – မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ ဒီရာသီရဲ႕ ကေမာက္ကမအႏိုင္ဆုံးပြဲစဥ္မွာ သူတို႔အသင္းရဲ႕ မွတ္တမ္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္မွာ ရွက္ဖီးလ္ဒ္ကို ၄၈ ႏွစ္ၾကာ မရႈံးတဲ့ စံခ်ိန္ကို က်ိဳးပ်က္သြားခဲ့တာပါ။ ရွက္ဖီးလ္ဒ္တို႔အေနနဲ႔ေတာ့ ယူႏိုက္တက္ကို အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္မွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ႏိုင္ပြဲ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ေယာ့ခ္ရႈိင္းယားကလပ္လည္းျဖစ္လာၿပီး လိဒ္စ္ယူႏိုက္တက္ထက္ေတာင္ သူတို႔က သာလြန္သြားခဲ့ပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္ကို ပထမဆုံးဂိုးေတြနဲ႔ အားေပးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဦး – ဒီေန႔ပြဲမွာ ရွက္ဖီးလ္ဒ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ဂိုးႏွစ္ဂိုးကို သြင္းယူခဲ့တဲ့ ကီးန္ ဘ႐ိုင္ယန္နဲ႔ အိုလီဗာ ဘာ့ခ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ္ဂိုးေတြကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေရွ႕မွာေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ လက္စတာရဲ႕ အက္စတီဘန္ ကမ္ဘီယာဆိုနဲ႔ ေဂ်မီ ဗာဒီတို႔က အခုလိုမ်ိဳးပဲ စံခ်ိန္ရထားဖူးတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
ရော်နယ်ဒို ဒီတသက်မရနိုင်တော့တဲ့ စံချိန်ကို ၂ ပွဲအနားယူပြီးနောက် ရိုက်ချိုးပြခဲ့တဲ့ မက်ဆီ